Hadalkii Dhawaan Ee Pual Pogba Kuna Saabsanaa Graeme Souness Oo Jawaabtiisa La Helay? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Dhawaan ayay ahayd markii uu xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Manchester United ee Pual Pogba uu muran ka abuuray in aanu garanayn cida uu yahay khabiirka Sky Sports ee Graeme Souness.
Dad badan oo kubbada cagta ku dhex jira ama garanaya ciyaartoygii uu Graeme Souness ahaa ayaa Pual Pogba si wayn ula yaabay waxaana jiray yalyayo aad u duray xidiga reer France laakiin halyayga kooxda Liverpool ee Robbie Fowler ayaa Pual Pogba si wayn ula hadlay.
Robbie Fowler ayaa Pual Pogba u tilmaamay in si uu u arko sida uu Graeme Souness u ahaa khad dhexe oo dhamaystiran in uu muddada lagu jiro go’doonka coronavirus uu daawado finalkii koobka kooxaha Yurub ee magaalada Rome ay Liverpool ku ciyaartay sanadkii 1984 kii.
Dhinaca kale Robbie Fowler ayaa Pual Pogba ka rajeeyay in marka ciyaaraha kubbada cagta lagu soo laabto laga filayo in uu muujiyo waxa uu qaban karo mar haddii uu Graeme Souness oo loo arko ciyaartoydii khadka dhexe ee abid ugu fiicnaa uu garan waayay ama uu isdiidsiiyay.
Robbie Fowler ayaa yidhi: “Graeme Souness waa mid ka mid ah khadadkii dhexe ee ugu waa waynaa ee abid soo ciyaaray kubbada cagta. Sidoo kale waxa uu soo noqday tababare fiican wuxuuna hadda yahay khabiir TV oo si wayn loo ixtiraamo”.
“Isagu kama cabsado in uu sheego waxa uu xaqiiqdii ka fikirayo marka la waydiiyo in uu fikrad ka bixiyo ee wax walba oo uu indhihiisa ku arko ama uu markhaati ka yahay ee dhamaan ciyaaraha oo dhan intii lagu jiray lixdankii sanadood ee ugu danbeeyay” ayuu Flowler oo Graeme Souness ka sii hadlayaa hadalkiisa ku daray.
Robbie Fowler ayaa intaas kadib ka hadlay jawaab uu Graeme Souness ka bixiyay mar Pual Pogba laga hadlayay wuxuuna yidhi: “Sidaa daraadeed, haddii uu qof u qalmo in uu ka hadlo Pual Pogba iyo waxa uu xidiga reer France u baahan yahay si uu ciyaartoy ka fiican u noqdo, waa Graeme Souness. Talladayda Pual waa in uu dhegaysto wixii uu isagu sheegay oo aad naftaada waydiiso haddii aad fahantay. Waxaad noqon kartaa ciyaartoy ka sii fiican”.
Robbie Fowler ayaa Pual Pogba u sheegay cida uu yahay wuxuuna yidhi: “Isagu waxa uu ogaan doonaa in ninkani yahay kii shanta koob ee horyaalka Premier league iyo saddexda koob ee kooxaha Yurub Liverpool kula soo guulaystay”.
“Graeme Souness waxa uu sidoo kale koobab kula soo guulaystay Sampdoria iyo Rangers intii aanu waayihiisa tababare bilaabin kaas oo ka soo bilawday Scotland oo uu ku yimid England, Turkey, Italy iyo Portugal”.
Robbie Flowler ayaa Pual Pogba fariintan u diray wuxuuna yidhi: “Haddii uu Pual Pogba doonayo in uu arko bandhiga khadka dhexe oo dhamayskatiran inta lagu jiro go’doonka, kadib waxa uu Youtube-ka ka daawan karaa sidii uu Graeme Souness kabtanka ugu ahaa Liverpool finalkii koobka kooxaha Yurub ee ka dhanka ahaa Roma 1984 kii ee garoonka kooxda reer Talyaani ee Olympic Stadium”.
“Souness waxa uu ciyaaraha ku yaqaanaa heerka tababare iyo ciyaartoy ee ugu sareeya, wuxuuna og yahay waxa ku dhex jira. Habeenkaas waxa uu Souness si toos ah uga hor yimid Cerezo iyo Falcao , waa laba khad dhexe oo Brazil ah kuwaas oo lagu xusuusto doorkii ay ku lahaayeen kooxdii abid ugu fiicnayd ee koobka aduunka ku guulaystay. Isagu waxa uu ku dhamaystay in uu ahaa ka koobka qaaday”.
Robbie Flowler oo wali Pual Pogba la sii hadlaya ayaa yidhi: “Waxaan hubaal kaaga dhigi karaa in marka uu Graeme uu bandhigaaga ka qiimaynayo stuudiyaha TV-ga in uu ku samaynayo xisaabta indho qabow isla markaana ay Graeme Souness cadho galiyo”.
“Waxa dhiiro galinta lihi waa in xaqiiqdii uu Pogba ka war qabo in hadalka ka yimid uu cadayn u baahan yahay. Waxaan rajaynayaa in marka ay caadiga ku soo noqoto in uu isagu ina tusi doono waxa uu awoodo in uu qabto” ayuu Flower hadalkiisa ugu soo xidhay Pogba.
Kooxda Barcelona Oo Shaacisay Inay Maalmaha Soo Socda La Soo Wareegi Doonto Ciyaartoy Leganes Ka Tirsan?